के तपाईं कहिल्यै liqueur प्रयास गरेका छन्? predominantly महिला विकल्प मानिन्छ केही कारणले एक नाजुक स्वाद र ठीक को अचम्मको सुगन्ध, यो सुखद पेय। तर यो छ? को पाठ्यक्रम छैन।
मखमली र स्वादिष्ट स्वाद प्रसिद्ध आउटडोर उच्च गुणस्तरीय मादक पेय को कुनै पनि पारखी प्रभावित छैन। त्यहाँ आउटडोर को विभिन्न प्रकारका छन्: क्रीम, दूध, चकलेट, वेनिला, कफी, मलाईदार, अन्डा, फल, हर्बल, व्हिस्की, आउटडोर, आदि विभिन्न प्रयास गर्न, तपाईंले आफ्नो स्वाद, सुगन्ध, रंग र उपयुक्त छ कि एक किसिम पाउन सक्नुहुन्छ .. संरचना।
शब्द 'liqueur' ल्याटिन बाट लिइएको हो। रक्सी - «तरल»। आविष्कार नाम आउटडोर, जाहिर छ, पुरातन चिकित्सकहरु र वैज्ञानिकहरु भिक्षुहरूले फरक पिउने लागूपदार्थ आविष्कार। र हर्बल elixirs को स्वाद थियो, यो सौम्य, peculiar, सिपालु डाक्टर चीनी र मह मा मिश्रित गर्न राख्न।
फलस्वरूप, हामी यस पेय को धेरै भेरिएसनहरूमा सिर्जना गर्न व्यवस्थित। आउटडोर केही नामहरू सम्मान मा देखा को monastic आदेश, जहाँ तिनीहरूले पहिलो उत्पादन थिए, वा जहाँ तिनीहरूले सिर्जना भौगोलिक सम्मानको।
आज आउटडोर फल र हर्बल निष्कर्षों, सुदृढ फल वा बेरी रस, आवश्यक तेल, स्वादिष्ट एजेन्ट र चिनी संग मिश्रित बनाइएका छन्। scalding 15% 75 मा% कोमल देखि गढ को डिग्री मा इथाइल अल्कोहल पेय को मात्रा फरक।
तपाईं कुलीन मादक पेय रुचि राख्नुहुन्छ भने, यो आउटडोर को नाम को केही सम्झना गर्न उपयोगी छ, विश्व प्रसिद्ध:
"Galliano को" (इटालियन)।
"मिन्टक्रिम color" (फ्रान्सेली)।
"महान् Marnier" (फ्रान्सेली)।
"मन्डारिन नेपोलियन" (बेल्जियम)।
"Jägermeister" वा "Jägermeister" (जर्मन)।
"दक्षिणी सुविधा" (अमेरिका)।
"TIA मारिया" (Jamaican)।
एक invigorating पेय को प्रशंसक लागि
सबै कफी पीने पक्कै स्वादिष्ट कफी liqueur कदर हुनेछ। नाम फरक हुन सक्छ, "मोचा", "मोचा क्रीम", आदि तर सबै भन्दा प्रसिद्ध कफी liqueur - मेक्सिको घर छ "Kahlua", छ ... पेय उपलब्ध विभिन्न किसिमहरु: थप्दा चकलेट, वेनिला, हेजलनट, आदि ...
कफी रक्सी को बल 36 20 को बीच र डिग्री छ। यो पेय अक्सर प्रयोग गरिन्छ ककटेल लागि (प्रसिद्ध व्यञ्जनहरु सहित - काला रूसी र सेतो रूसी)। अक्सर, कफी liqueur पिएको chilled, पनि बरफ संग। कहिले काँही, गढ कम गर्न, तिनीहरूले पानी वा दूध संग पतला छन्। यो मिठाई tiramisu मिठाई वा parfait संग खाना पछि कफी liqueur एक गिलास पिउने विशेष गरी सुखद छ।
Opposites को विलय
राम्रो stringy एक नाजुक स्वाद, तर आउटडोर छ। उत्कृष्ट रक्सीको मान्नेहरूले मा सुनुवाइ तिनीहरूलाई थुप्रै नाम, "बेली", "Sheridans", "क्यानरी", "Brogans", "वकील" र अरूलाई।
यो कुरा कल्पना गर्न गाह्रो जस्तो थियो, त्यसैले हावा र प्राकृतिक क्रीम साँच्चै बलियो रक्सी रूपमा प्रत्येक अन्य रुचि छैन। तर, यी दुई सामाग्री को क्रीम liqueur को आधार हो। को रक्सी घटक सामान्यतया एक आइरिस वा छ रूपमा स्कट व्हिस्की, वोदका र रम।
तर liqueur परंपरागत स्वादिष्ट ककटेल को तयारी मा प्रयोग गरिन्छ। यसको शुद्ध रूप, साथै कफी, एक भोजन को समापन मा चिया वा कफी, साथै विभिन्न मिठाईहरू संग खपत। विशेष गरी राम्रो क्रीम liqueur संग संयुक्त छ आइसक्रिम, फल सलाद र पेस्ट्री।
Anise liqueur - रक्सी पिउने पेय को नाम, बोट अर्क को आधारमा गरे। परंपरागत, मुख्य घटक तारा anise कम, anise रूपमा कार्य। यस्तो विशेष स्वाद liqueur - उज्ज्वल र धनी aftertaste संग राम्रो मिठास। viscous को हदसम्म - सुगंध नाजुक, anise, कागति र स्थिरता हुनुपर्छ। तपाईं पानी पिउन भने दूध को रंग प्राप्त, यो एकदम बादल पतला गर्न।
anise आधारमा मादक पेय धेरै देशहरूमा धेरै लोकप्रिय छन्, र प्रत्येक नाम मा रक्सी राष्ट्रिय विशेषताहरु संग सम्बन्धित छन्। उदाहरणका लागि, मध्य पूर्व र मध्य एशिया, फ्रान्स "Arak" भनिने liqueur मा - ग्रीस मा "Pastis" - "Ouzo", र इटाली - "Sambuca"। उत्तरार्द्ध प्रकारको सबै दुनिया भर प्रसिद्ध छ। यसलाई साथै चिकित्सकीय गुण को एक नम्बर छ चिसो व्यञ्जन, मिठाईहरू र पनीर एउटा उत्कृष्ट पूरक हो। अक्सर, यो पेय को उपयोग गर्नु भन्दा पहिले यो ग्लास मा ignited छ। यो पेय को प्रसिद्ध संस्करण पनि एक फ्रान्सेली मसालेदार liqueur "Anisette" छ।
खूबानी ब्रांडीको दबाव डाल वा मिश्रण बलियो पेय यी फल को ताजा रस एक सुखद स्वाद र खूबानी liqueur को मोहक सुगन्ध झेलिरहेका छन्। यो पेय को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार को नाम नै लागि बताइएको - "Abrikotin"। यसलाई व्यापक मिठाई उत्पादन धेरै व्यञ्जनहरु मा प्रयोग गरिन्छ: .. केक, गुलियो Pies, जेली, आदि हाल, यो ब्रान्ड खूबानी रक्सी दर्ता र फ्रान्स निर्मित।
खूबानी रस को आधार मा प्रसिद्ध liqueur "खुबानी ब्रांडीको" र बीउ तयार विश्व-प्रसिद्ध "Amaretto" प्रयोग गरे।
पनि धेरै लोकप्रिय यो सुखद र खुशबूदार पेय को धेरै घर व्यञ्जनहरु छन्। साथै, खूबानी liqueur केही रोचक र सुन्दर ककटेल लागि आधार छ।
को सही प्रयोग रहस्य
आउटडोर भोजन, केक र मिठाईहरू को पूरा रूपमा सेवा गरे। पेय खपत त्यहाँ, एक सानो सानो मात्र सेतो रक्सी ग्लास जस्तै देखिन्छ कि विशेष liqueur लामो बाला मा ग्लास छ। 25 एमएल को साधारण चश्मा रक्सी लागि क्षमता, तर त्यहाँ 40 प्रजाति र 60 एमएल छन्।
त्यहाँ छलफल पेय प्रयोग गर्न दुई तरिकाहरू छन्। पहिलो - छोटो पेय (volley तत्काल धनी aftertaste अनुभव गर्न)। दोस्रो - लामो पेय (बिस्तारै sipping र सबै स्वाद र aromas आनंद)। एक विशेष विधि को लाभ को विविधता र पेय को स्थिरता मा निर्भर गर्दछ।
तपाईं महान सुखद र सुगन्धित आत्माहरू एक प्रशंसक हुनुहुन्छ र रक्सी गर्दा आउटडोर विभिन्न प्रकारका मिठाईहरू साथ सँगै पिउन प्रेम भने - यो तपाईं को आवश्यकता के छ।
जर्मन शीर्ष-किण्वित बियर
Unearthly खुशी प्राप्त गर्न "Bacardi" कसरी पिउन?
Kombucha - मजा र ठूलो लाभ
तरकारी aldente: कसरी तयार गर्न र कुन कुरा विचार गर्न
म आफ्नो शरीर मा एक निशान भेटिएन। के गर्ने?
Aerogrill रेडमन्ड RAG-241: समीक्षा। कवर-aerogrill रेडमन्ड RAG-241
कान मा दुखाइ - एक व्यक्ति उपचार गर्न भन्दा?